musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Netherlands Kuputsa Nhau » Netherlands inopinda mukuvhara kutsva
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Hurumende ye Netherlandyakazivisa kuti kutanga neMuvhuro, Mbudzi 29, mabara ese nemaresitorendi achavharwa panguva dzehusiku uye zvitoro zvisina kukosha zvichavharwa kubva 5pm kusvika 5am. Masks achadiwa muzvikoro zvesekondari, uye munhu wese anogona kushanda ari pamba anokurudzirwa kudaro.
Hurumende yeDutch yakawedzera zvakare zvirambidzo zvedenda, sezvo nyika iri kurwisa rekodhi-inotyora COVID-19 kuvhiya nezvipatara zvenyika zvakatarisana ne 'code black' mamiriro.
Vachibvuma kuti nhamba dzezviitiko zvitsva zvehutachiona hunouraya dzave "dzakakwira, dzakakwirira, dzakakwirira" zuva nezuva, Mutungamiriri weDutch, Mark Rutte, akati "gadziriso diki", kusanganisira kudzoserwa kwemasks echiso, hazvina kukwana kumisa rekodhi. -kutyora COVID-19 wave.
Kunyangwe 85% yehuwandu hwevanhu vakuru munyika vari kubaiwa, kuwedzera kwe Netharenzi inonzi yakaipisisa muWestern Europe.
Kwevhiki rapfuura, pamusoro pezvirwere zviuru makumi maviri pazuva zvakanyoreswa, zvichimanikidza mirairo kuzvipatara kuti vamise mabasa ese asiri ekurumidzira, kusanganisira hurongwa hwekenza nevarwere vemoyo. Nemibhedha yakawanda inodiwa kuvarwere veCCIDID-20,000 vari munzvimbo dzinotarisirwa varwere, vamwe vanhu vanorwara vakaendeswa kunorapwa kuGermany.
Kusunungura mawadhi nemibhedha yeICU yevarwere vakatapukirwa zvakanyanya neconavirus, hurongwa hwehutano hwenyika huri kugadzirira 'code dema' mamiriro, umo vanachiremba vanogona kumanikidzwa kusarudza kuti ndiani anorarama uye anofa, nekuda kwekushaikwa kwezviwanikwa zvekurapa munhu wese anoda. care. "Zvipatara zvatotarisana nesarudzo dzakaoma kudaro," sachigaro wedare rezvokurapa muRotterdam, Peter Langenbach akadaro.
Ipo mamiriro eCCIDID-19 anga achityisidzira kuremedza iyo Dutch hutano system mwedzi uno, ichangobva kuwanikwa mutsauko, iyo super-mutant Omicron, inongowedzera kune yagara isingaite.
Kekutanga kuonekwa muBotswana neSouth Africa, B.1.1.529 dhizaini rekoronavirus rave kuziviswa zviri pamutemo mutsauko mutsva wekunetsekana World Health Organization (WHO).
Kutya kuri kukura kweiyo Omicron musiyano kwakakonzera kurambidzwa kufamba kwepasirese, kusanganisira mu Netharenzi, uko kubhururuka nendege kubva kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakavakidzana nayo dzakarambidzwa neChishanu. Izvi zvinouya pamwe chete nenhau dzeCovid-19 bvunzo mhinduro kubva kune vafambi vachangosvika kubva kuSouth Africa kuenda kuAmsterdam's Schiphol Airport. Vanosvika makumi matanhatu nevaviri vevanosvika mazana matanhatu vakaratidza kuve vakanakira hutachiona.